Google Chrome Inozopedzisira Yarega Kupedza Yese Yako RAM
Kubva munaZvita 2020, Google Chrome yakaverengera ingangoita makumi matanhatu nenomwe muzana yepasirese desktop internet browser musika. Iyo yakavimbika uye inoratidzira-yakazara webhu bhurawuza zvakare inotonga nharembozha internet browser musika.
Zvinosuruvarisa, Google Chrome inyanzvi-yakasimba web browser. Bhurawuza inozivikanwa kuti inotora huwandu hunoonekwa hwe RAM yekushanda kwayo. Zvinoenderana ne mushumo mutsva kubva Windows Kwazvino, Google inogona kukurumidza kugadzirisa zvinoitika zvinoenderana neChannel.
Saka hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezve iri kuuya Google Chrome gadziriso.
KupatsanuraAlloc-Kwese Kwese Kutsigira kweGoogle Chrome
Munguva pfupi yapfuura, 'Chikamu cheAlloc-kwese' rutsigiro rwakaonekwa mune yekodhi yekodhi yeChannel. Google yakatanga kushanda pane zvambotaurwa kare mu2020 uye zvave kuwanikwa mune yazvino beta vhezheni yeChrome ye Windows 10 uye Android.
Iwo matatu ekutanga mabhenefiti e'PartitionAlloc-pese pese 'rutsigiro anokurumidza kuvhura bhurawuza, yakavandudzwa kumhanya uku uchirodha mukati memapeji, uye zvirinani manejimendi manejimendi mune mamwe mazwi mashoma RAM mashandisiro.
PartitionAlloc inowanikwawo kuLinux asi panguva yekunyora chinyorwa ichi, yatambudzwa nenyaya.
Injiniya yeGoogle akadaro mune chinyorwa cheChromium bug, "Chinja kuChikamuAlloc paLinux. Izvi ndizvo zvatove default pa Windows uye Android uye yanga ichiendesa kune beta pane ese mapuratifomu. Zvakadaro, nyaya dzinogona kuramba dziri paLinux."
Kuti uwedzere kudzikisa kushandiswa kwe RAM, Google yaitisa imwe kuyedza. Mhedziso yakatorwa kubva kuyedzo iyi ndeyekuti kubatanidza zvakajairika uye zvakabatana zvikamu zvinogona kudzora ndangariro kushandiswa.
Google inoenderera mberi akatsanangura kuti,
"Kuva nezvikamu zviviri zvakasiyana kunodiwa kana iyo yenguva dzose isingape kuenderana kunodiwa. Pasina izvo, zvinobatsira kuita uye ndangariro-kuchenjera kuve nekaga chikamu. Kuita kuri nani sezvo zviyero zvakaenzanirana (izvo zviri chaizvo zvakawanda muChromium) zvinogona kuwedzera shinda cache. Ndangariro tsoka inovandudzika kubva pakadzikira, uye kusabhadhara yakatarwa mutengo wekuparadzanisa metadata."
Kana zvese zvikafamba mushe tinogona kutarisira kuona PartitionAlloc-pese pese mune yakagadzikana vhezheni yeChannel.
The post Google Chrome Inozopedzisira Yarega Kupedza Yese Yako RAM yakatanga kutanga TechWorm.
Android 11 Beta 1 yakatenderera kutanga kune vamwe vashandisi vePixel 4: Hezvino zvitsva